China ROUNDBAR BOLT ụlọ ọrụ na ndị na -emepụta | TRM
TRM raara onwe ya nye n'ichepụta nchekwa na ngwaahịa nkwado ala ruru eru maka ngwa n'ime m, ọwara na mkpọda wdg n'akụkụ akụkụ nke sistemụ Split setịpụrụ na mgbachi mgbachi na mbadamba ihe, anyị na -enyekwa ihe mgbachi igwe nchara dị ka mgbachi okirikiri. Roundbar bụ ihe igwe na -ewu ewu nke ukwuu n'ahịa na igwe igwe nwere ike ịnye ọtụtụ ọkwa ọkwa ọkwa dị iche iche iji mezuo ihe dị iche iche dabere na ọnọdụ strata, na -abụkarị ọkwa nke bọọdụ bolt anyị na -enye bụ Q235, Q345, 40Cr, 20MnSi , #45 wdg nke ya na ASTM A36, A6, 5140 AISI A706M ASTM1045 wdg. Anyị nwekwara ike ịnye ọkwa nchara ọzọ iji nyere onye ahịa anyị aka ịhọrọ ọkwa ziri ezi nke ogwe nchara maka mkpọchi okirikiri ha, nye onye ahịa ihe kacha mma ngwọta iji dozie nsogbu nkwado ha na ọnụ ala. A ga -arụgharị ihe nkedo n'otu njedebe nke mkpọchi okirikiri a ga -ejikwa pin dochie bọọdụ ahụ, n'otu oge ahụ anyị na -enyekwa mkpụrụ akụ na asherị niile ejikọtara ya na bọọdụ okirikiri. Anyị na -anabata ndị ahịa ka ha nye anyị ụdị mkpụrụ akụ na ndị na -asacha ya, anyị nwere ike nye mkpụrụ na asher site na nkedo, ịkpụ ihe na igwe. Iji nyere aka agwakọta capsules resin ma mee ka okirikiri okirikiri nwee nguzogide Anti-Shear na arụmọrụ nkwado, anyị na-pịakwa ụdị ụfọdụ "D" n'akụkụ akụkụ mkpọchi okirikiri nke anyị kpọrọ ya dị ka "D-Bolt", ọ nwere ọtụtụ ihe arụmọrụ ka mma na ọrụ nkwado. Anyị nwekwara ike ịnye isi mkpọchi okirikiri okirikiri nke dabara adaba iji na ngwa nkwado ala.
ROUNDBAR BOLT atụmatụ
Klas dị iche iche nke okirikiri dị.
Isi aghọọla nwere threadend ma ọ bụ shei dị.
usoro nkwado ala dị mfe, dị ọnụ ala.
Ngwa dị ka asher na akụ dị.
Resin katrij dị.
1. A ga -egwupụta oghere nwere dayameta kwesịrị ekwesị maka nha osisi n'ime ụlọ strata ihe dịka 25mm ogologo karịa mkpọchi okirikiri ahụ. Tụọ site na ebe efere na -emetụ elu ụlọ ruo n'elu mkpọchi.
2. Tinye katrij resin n'ime oghere. Ogologo na ụdị resin dị ka akọwapụtara na atụmatụ njikwa ụlọ.
3. Site na mgbachi dị na mkpọchi mkpọchi, tinye mkpọchi torque/erughị ala n'ime oghere ruo ebe efere elu ụlọ dịtụ ntakịrị na -agbada n'ahịrị ụlọ na enweghị nrụgide mmụba dị ukwuu. Ugbu a, na-atụgharị bolt na-aga elekere aka elekere maka sekọnd 5-10 (ma ọ bụ dị ka ndị nrụpụta resin na-atụ aro maka ụdị resin a na-eji) iji hụ na agwakọtara ngwakọta ahụ nke ọma. Na -aka gị mgbe niile ka ị ghara ịkpụgharị akụkụ.
4. Ugbu a, jide ọgbakọ mkpọchi ahụ n'ọnọdụ (etinyela mgbali elu ọ bụla) opekata mpe nke 10-30 sekọnd (dabere ihe ejiri resin mee) iji nye ohere ka resin hazie nke ọma.
5. Mgbe resin setịpụrụ nke ọma, jiri aka kacha nta tụgharịa mkpọchi mkpọchi ya n'otu elekere wee tinye torque na mkpọchi dịka atụmatụ njikwa elu ụlọ m si dị. nke a mechaa nwụnye.
Nke gara aga: W-IKE
Osote: THREADBAR BOLT
Okpokoro Roundbar nke m
Roundbar kpọchie Factory
Roundbar kpọchie Supplier